Windows error လေး တစ်ချို့ | အိမ့်မှူးသော်
WinHTTP Web Proxy Auto Discovery Services
Pear Name Resolution Protocol
စတဲ့ Network နဲ့ပက်သက်သမျှတွေကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်ထားရင် Windows ထဲမှာပေါ့နေစေပါလိမ့်မယ်၊ နောက်ထပ်စက်တက်ချိန်မြန်အောင်လုပ်နည်းကတော့ Windows အပိုင်းထဲက စက်တက်ရင်စအလုပ်လုပ်တဲ့Files လေးခုရှိတဲ့ autoexe.bat , config.sys , system.ini , msdos.sys ထဲက config.sys ကို Notepad နဲ့ဖွင့်ပါ ပြီးတော့ stacks=0,0 ပေးလိုက်ပါ၊နောက်ပြီး system.ini ရဲ့ [386enh] အောက်မှာ LocalLoadHigh=1 DMABufferSize=64 ပေးလိုက်ပါ နောက် msdos.sys မှာတော့ Logo=0 Drvspace=0 Dblspace=0 DisableLogo=1 AutoScan=0 ပေးထည့်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် စက်စတက်ချိန်မြန်လာစေနိုင်ပါတယ်။ စက်တက်တာမြန်အောင်လုပ်ပြီးတော့ စက်ပိတ်တာကိုကောမြန်အောင်လုပ်ကြဦးမလား ဒီအတွက်ကတော့ နောက်က ပါဝါကြိုးကိုဆွဲသာဖြုတ်လိုက်ဘာမှနှိပ်နေစရာတောင်မလိုဘူး နောက်တာပါ Desktop ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ new > shortcut ကိုသွားပါ ဘာအတွက်လဲမေးရင် shutdown ပေါ့ ဘယ်လိုထားမလဲမေးရင် shutdown-s-t0 ပေါ့ ပြီးရင် Ok ပေါ့ သူ့ကို့ click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် shutdown ကိုအမြန်ဆုံးချပေးပါလိမ့်မယ် အဲ့နည်းကနောက်ပိုင်း windows တွေမှာသုံးခွင့်မရှိတော့ဘူးဗျ ထပ်ပေးမယ်လေ shutdown.bat ဖိုင်တစ်ခုရေးလိုက်ပေါ့ notepad မှာ
Shutdown-s-t0-c
လုပ်ရင် shutdown.bat လို့ပေးလိုက် မြန်မြန်ပိတ်ချင်တဲ့အချိန်သူ့ကို click နှစ်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပွဲပြတ်ကော။ Windows ထဲမှာ Folder
Option တွေ Task manager တွေပျောက်နေလို့ registry နဲ့ Group Policy ကနေခေါ်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ registry နဲ့ Group Policy ကောပိတ်နေရင်တော့ခေါ်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး အဲ့အတွက် run မှာ cmd ကိုရိုက်လိုက်ပါ cmd ကနေ ခေါ်လို့ရပါတယ် registry နဲ့ Group Policy တို့ကိုပါ။m အဲ့ run ပါပိတ်ထားရင်တော့ start menu က all programs ကနေ accessories > Command prompt ကနေ၀င်နိုင်ပါတယ်all programs ပါဖျောက်ထားရင်တော့ registryကို system32 အောက်ထဲက regedt32.exe ကနေတိုက်ရိုက်ခေါ် run လည်းရပါတယ်။
Windows logon , logoff sound တွေကိုပြောင်းကြည့်မယ် Control panel ထဲက sound မှာ sounds
tab ကိုဝင်ပြီးတော့ program event ဆိုတဲ့စာအောက် box ထဲမှာ Windows logon ကိုရှာပါ ပြီးရင် select
ပေးထားပြီးတော့ Browse ကနေကိုထည့်ချင်တဲ့သီချင်းသံကို Edit လုပ်ပြီးထည့်ထားလို့ရပါတယ် ဒီလိုပဲ Exit windows မှာလဲ ကြိုက်တဲ့သီချင်းကြိုက်တဲ့အသံကို ရွေးပေးထားလို့ရပါတယ် ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ Logon sound ကို Rဇာနည်ရဲ့အသံဗြဲကြီးနဲ့အော်ထားတဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့အသံထည့်ထားပြီးတော့ Exit windows soundကို ကိုကျော်ဟိန်း ရဲ့ ဒိုးရတော့မယ်အချစ်ရေ အာဟ အာဟ ကိုထည့်ထားပါတယ်။
ထပ်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ အဖြစ်များတဲ့ Windows တက်မလာဘဲ NTLDR Missing ပြနေတဲ့ပြသနာပါ NTLDR က Windows စတက်ချိန်မှာခေါ်သုံးတဲ့ကောင်ပါ သူမပါရင်ပွဲမစည်ဘူးပြောရမှာပေါ့ Virus ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် Windows error ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် NTLDR ပျောက်နေရင်တော့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပြောပြလိုက်ပါမယ် စက်ရဲ့ ROM ထဲမှာ Windows installation အခွေထည့်ထားပါ Boot ကို ROM နဲ့တက်ပါ Windows Installation လမ်းစဉ်အတိုင်းပဲရွေးပေးရမဲ့နေရာရောက်ရင်တော Repir(R ) ကိုနှိပ်ပြီးရွေးလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ Repir command ထဲရောက်တော့မှ Windows ခွေထဲက NTLDR ကို copy ကူးပြီး စက်ထဲက Windows အောက်က system32 ထဲကိုထည့်ပေးပါ ပြီးရင် reset ပြန်ချလိုက်ပါ Boot ကို normal အတိုင်း Windows နဲ့တက်ကြည့်ပါ Windows ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်။
အိမ်မက်ကောင်းကင် 7:59 AM
ကျွန်တော့် Laptop(FujitSu) ပါ Bluetooth မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒါကော်ပြောပြပေးလို့ရမလားမသိဘူး
First of all I would like to say excellent blog! I hadaquick question which I'd like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Kudos!
Review my web site: ford ranger